Gafadi Kura || स्वास्थ्य Archives - Gafadi Kura Collection
दही र चामलको प्रयोगबाट तौल घटाउने अचुक उपाय ! हेर्नुहोस दही र चामलका ५ अचुक फाइदाहरु !
सायद कहिले-काहीं तपाइको घरमा तपाइको आमा-बुबाले चामल मिसाएर खानाले मोटाइन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ होला। हो चामलले मोटाउन मदत गर्छ। तर कुनै अवस्थामा दही चामल खानाले तौल बढ्ने होइन घट्ने गर्छ। यहाँ हामी तपाईलाई कसरी दही-चामल मिसाएर खानाले आफ्नो मोटो पेटको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउदै छौं। यो बाहेक चामलमा दही मिसाएर खानाले तपाई हाम्रो स्वास्थको लागी धेरै फाइदाजनक हुन्छ। दही चामल मिसाएर खानाले के फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस्। मोटो...
अब ५ मिनटमै आफ्नो अनुहारको सबै दाग हटाउने सजिलो उपायहरु हेर्नुहोस भिडियो सहित
अनुहारको दाग, धब्बा र डण्डिफोरले तपाईं पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि यो जानकारी वरदान नै हुनेछ। अनुहारको दाग, धब्बा र डण्डिफोरले तपाईं पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि यो जानकारी वरदान नै हुनेछ। अनुहारको दाग, धब्बा र डण्डिफोरले तपाईं पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि यो जानकारी वरदान नै हुनेछ।दाग धब्बाले बिगारेको अनुहारलाई ५ मिनेटमा यसरी हटाउनुहोस्। जानकारीका लागि भिडियो हेर्न तल जानुहोला ! अन्धविश्वासमा ढोंगी तान्त्रिकको पछि लाग्नेहरुले राजधानीमै मानव खप्पर...
कण्डम उत्पादक कम्पनीहरुले मार्केटिङका लागि केही न केही प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । कहिले नयाँ नयाँ प्रकारका माध्यमबाट त कहिले अनौठो फ्लेवरबाट ।चकलेट, बटर स्कच, स्ट्रबेरी जस्ता फ्लेवरको कण्डमले यसअघि नै बजारमा धमाका पिटिसकेका छन् । कण्डम उत्पादक कम्पनी मेनफोर्सले हालै एक अनौठो वासना भएको कण्डम सार्वजनिक गरेको छ । सायद दुनियामा पहिलोपटक कम्पनीले अदुवाको बासना आउने कण्डम लञ्च गरेको हो । कम्पनीले यो कण्डमको बाहिरी खोलको लुक्स पनि आफ्नो ट्विटर...
Omg..९ वर्षीय बालकलाई लाग्यो संसारमै मानिने दुलर्भ रोग…यस्तो त कसैलाई पनि नहोस्..(पुरा पढ्नुहोस् )
संसारमा निकै डरलाग्दा रोगहरु पनि हुने गर्दछन । मानिसलाई जति पनि रोग लाग्छ त्यसको निको हुने उपाय केहि न केहि हुन्छ तर दक्षिण पाकिस्तानको एक बच्चालाई यस्तो रोग लागेको छ जुन निकै दुर्लभ रोग हो । सामान्य अवस्थामा जन्मिएका ९ वर्षीय एक बालक संसारमै दुलर्भ मानिने रोग लागेपछि खान–लाउन र स्कुल जानसमेत अप्ठ्यारो परेको छ । दक्षिण पाकिस्तानको विकट गाउँमा परिवारका साथ रहेका सह गुल मजारी नाम गरेका ९...
महिलाहरुको शरीरमा हुने नियमित जैविक प्रक्रिया हो मासिक श्राव । तर यो विषयमा थरिथरिका विचारहरु पाइन्छन् । परम्परागत हिन्दू धार्मिक मान्यताल महिनवारीको समयलाई अछूतका रुपमा व्यवहार गर्दछ । हिन्दूहरुका अनुसार, महिनावारी हुँदा महिलाको शरीरबाट फोहोर रगत निस्किने हुँदा उनी अशुद्ध हुन्छिन् । त्यसैले महिनाबारी हुँदा महिलालाई खाना पकाउन नदिने, पूजाआजामा सहभागी हुन नपाइने, अरुसँग नछोइकन बस्नुपर्ने नियम बनाइएका छन् । तर समयक्रम परिवर्तन हुँदै जाँदा यो प्रक्रियालाई सामान्य नियमित जैविकीय...
सेक्समा चरम आनन्द यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ
मास्टर्स तथा जोनसनले मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रलाई चारवटा चरणमा विभाजित गरेका छन्। ती हुन् : १ उत्तेजनाको चरण (एक्साइटमेन्ट फेज), २ प्लाटो फेज, ३. चरमसुख (अर्गाज्म फेज) र ४. रिजोलुसन फेज हो। प्लाटो फेजमा भएको यौन stimulation निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जसमा पुगेपछि व्यक्ति यौन तनावबाट मुक्त हुन्छ। यसको अवधि निकै छोटो हुने भए पनि मानव यौनजीवनमा यो चरणको विशेष महत्त्व छ, किनभने यतिबेला...
एजेन्सी । यदी तपाई सुरक्षित सेक्स गर्नु हुँदैन भने अब तपाई जोखिममा पर्न सक्नु हुन्छ । अर्थात् एड्ससहित यौन रोगका अन्य जोखिमहरु त यसअघि बाटै थिए नै अब सेक्सकै कारण अर्को गम्भीर खतरा समेत विश्वमा भित्रिएको तथ्य पत्ता लागेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तटीयमुलुक ‘हवाई’मा ‘सेक्स सुपरबग’ नामक एक खतरनाक जीवाणुको दुईवटा मामिला बाहिर आएको छ । जसले विश्वभरका चिकित्सकलाई चिन्तित बनाएको छ । हवाईका स्वास्थ्य विभाग अधिकारीहरुले ‘सुपरबग’...
एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन केटीहरु ? थाहा पाइरख्नुहोस
योनको मामलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न ।तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहोर्याउने गरेको पाइन्छ । अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त ? १.अण्डकोष : अण्डकोष अति नै...
गर्भ नरहने यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ,त्यसो भए यौन सम्पर्कको लगत्तै पछी १० मिनेट यसो गर्नुहोस
डा. राजेन्द्र भद्रा म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ। मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो। सुरुमा सन्तानको चाहना नभए पनि हाल हामीले सन्तान खोजेका छौं, तर हालसम्म मेरो गर्भ रहेको छैन। कतै मेरो गर्भ नरहने त होइन ? मलाई डर लागिरहेको छ। मैले के गर्दा चाँडो गर्भ रहन्छ ?विवाह भएको तीन वर्ष भए पनि श्रीमान्सँगै हुनुहुन्छ वा अलग्गै बस्दै आउनुभएको छ ? पत्रबाट स्पष्ट भएन।तपाइर्ंले सुरुमा सन्तान नचाहेकाले परिवार...
दुध र दहिको साटो बदामको सेवन गर्दा यस्तो फाइदै फाइदा
काठमाडौ । आजकल घाममा बसेर बदाम खान एकदम मज्जा आउने जो कोहिलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो । बदाम पौष्टिक आहारको घर हो । यो खास गरि चिसो लाग्ने समयमा खाएमा हाम्रो शरिरका लागि एकदम राम्रो फाइदा हुन्छ । शरिरीक वृद्धिको लागि यसले सेवा पु¥याउछ। त्यसैले बदाम खान एकदम जरुरी छ । यदि तपाई दुध र दहिको सेवन गर्दैन भने बदाम खादा पनि हुन्छ । बदाममा आइरन,जिंक र क्यालसियम जस्ता...